UMBONO: Izinkampani azibatsheli abasebenzi ngezinsiza zokubathuthukisa | News24
UMBONO: Izinkampani azibatsheli abasebenzi ngezinsiza zokubathuthukisa
Durban - Inkulumo-mpikiswano yasePhalamende iveze ukuthi abantu abansundu bahola imali encane kakhulu uma kuqhathaniswa namaholo abamhlophe.
Lapha kubuye kwavela ukuthi bancane kakhuku abantu abansundu abasezikhundleni zokuphatha abahola imali ebafanele.
Ngabe lokhu kwenziwa yini?
Iningi labasebenzi ikakhulukazi labo abasebenza ezinkampanini ezinkulu ezingamafemU bakhala ngokungawatholi amathuba okuthuthukiswa kwamakhono kanye namathuba okuqeqeshelwa izikhundla zokuphatha.
Babodwa abakhala ngokuthi izimenenja azibatsheli uma kukhona izinhlelo zokuqeqesha, futhi kwesinye isikhathi batshelana bodwa.
Abanye bathi abatshelwa ngoba bayacindezelwa futhi abaphathi babanomona wokuthi bazothuthuka bese kwanda amathuba akuqhudelana ngokwezikhundla.
Thandazile Jili Cha sizani bo kumanje kuqashwa abantu sikhona asitshelwa esikoleni sibona ngamafomu nabantu bengena ehhofisi kubuhlungu ngoba makuvalwa izikole kuthiwa ngeke sisabuya ekubeni babethe ngeke besasishintsha.
Shortcode V. K. Mgwiji Cha, langikhona kuthuthukiswa amamenenja kanye nabathile abasebenza emahhovisi. Nemigudu ekufanele ngiyilandele uma ngihlukumezekile ayicacile kahle. Ngingaya kwinyunyana, kodwa kuyenzeka nayo nyunyana leyo ibe yingxenye yabahlukumezi. Uma umunt ezama ukuthola ummeli wangaphandle kuthiwe akavumelekile ukngena ngoba kuesivumelwano esathathwa yinyunyana nabaphathi esith abafunek abammel bangaphandle.
Sandile Makhathini Kumele ube lolwazi/ufunde "Employment equity act No.55 of 1998" Khona uzokwazi ukuthi umqashi umubamba kanjani ngalokhu angakwenzeli khona.
Sphamandla Dlamini umuhlukumezekile emsebenzini kumele uthathe iskhwama sakho ubuyele ekhaya uyothenga inkomo wenze umcimbi, kuyacaca ukuthi kukhona ongakwenzi kahle ekhaya.
Lindiwe Lindy Ndlovu La ngikhona baqasha abathandwa yibona ikakhulukazi amandiya nabelungu, uma kufika umuntu omnyama ezocela ukushiya icv kuthiwa akangene kwi-inthanethi. Hhay ubandlululo luza kabi impela mina ngiyitoho kodwa abantu baqashwa ngapha nangapha.
Ngesonto elizayo sizoxhumana nabomnyango wezabasebenzi basicebise kabanzi ngalolu daba.Umaunemibuzo ungayithumela ngemeyili noma usishayele ucingo kusenezikhathi.